Igama lesayensi: Brassica oleracea
Amagama ajwayelekile: i-Broccoli, i-Italian Broccoli noma i-Calabrese Broccoli
I-Broccoli ikhula njengamaqabunga angu-8 kuya ku-12 amaqabunga aluhlaza okwakhiwa abe yisimo se-bowl ngenhloko yembali noma ikhanda le-broccoli elikhuphuka phakathi nendawo. Leli khanda liyimifino enomsoco edliwa. Iqukethe amahlumela amaningi e-branching ahlanganiswe ndawonye ngalelo fomu, ngalinye linenhloko yembali futhi ndawonye bayakha ikhanda eliyinhloko. I-tender stem broccoli iyinhlobonhlobo enesikhathi eside, i-thinner igxile ngamakhanda amancane futhi kunezinye izinhlobo zama-broccoli ezitshalwe kuphela ukuze zisetshenziswe amaqabunga awo.
Yidla njengemifino, ivuselela okuthosiwe, ibilisiwe, i-steamed futhi ngezinye izikhathi idliwe emaqabunga ama-saladi. I-broccoli kuthiwa ingenye yemifino enomsoco kakhulu. Ingabe i-vitamin A ne-C. Broccoli ephezulu kakhulu iqukethe amazinga aphezulu e-folic acid, i-magnesium, i-calcium nensimbi. I-broccoli iphezulu e-fibre futhi inezakhiwo okuthiwa zilwa nomdlavuza obangela amagciwane emzimbeni wethu.
I-broccoli ihamba kahle kakhulu emhlabathini owunamanzi, owunhlabathi osolwandle ophezulu noma ocebile kahle. I-broccoli idinga inhlabathi ye-pH ephakathi kuka-6 no-6.8 nanoma yikuphi ukulungiswa kwe-pH okudingekayo, kwenziwa ngalesi sikhathi futhi. Umhlabathi ulungiswa ngokuklabhula bese uhlonywa ukujula kuka-600 mm. Ngalesi sikhathi noma yikuphi uketshezi, umquba noma umquba odingekayo ngaphambi kokutshala ungasebenza enhlabathini. Ipulazi ye-disc ingasetshenziselwa ukuqhubeka nokulungiselela nokulinganisa indawo okumele itshalwe kuyo.
I-Broccoli isitshalo sezulu esiphundu futhi ikhula kahle uma izinga lokushisa lishintsha phakathi kuka-14°C no-20°C. Akwenzi kahle ekushiseni okungaphezu kuka-24°C. I-broccoli ivame ukukhiqizwa eNingizimu Afrika ngesikhathi sasebusika nasekuseni kwentwasahlobo.
i-Valiant, i-Ares, i-Romanesco, i-Early Pearl, i-Pharos, i-Calabrese ,i-Imagine, i-Waltham, i-Naxos ne-Rapini.